आज सरकारले पूर्णता पाउँछ: जसपा नेता भट्टराई - Pabil News
आज सरकारले पूर्णता पाउँछ: जसपा नेता भट्टराई
अशोज २२ गते, २०७८ - १०:४२
धादिङ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएसँगै आज सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ ।
नेताहरूबीच मन्त्रिमण्डलमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाममा अनौपचारिक सहमति भएकोले सरकारले पनि आज पूर्णता पाउने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
मन्त्रीहरूको नाम लगभग टुंगिएको छ । भट्टराईले भने,‘अनौपचारिक सहमति भएको छ, दिउसो ४ बजे आसपास सपथ हुँदैछ, अहिले मन्त्रीहरुको नाम खुलासा नगरौं ।’ जसपाले पाउने मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन ।
कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएर गृह जिल्ला गोरखा आउने क्रममा धादिङबेसीमा रोकिएका डा. भट्टराईलेभने,‘जसपाबाट पनि एउटा पक्ष अलगिएको हुनाले थोरै नोक्सान त भयो, हाम्रो कारणले हिजो पनि रोकिएको होइन आज पनि रोकिदैन, आज सरकारले पूर्णता पाउछ । हामी त्यसमा सहभागी हुन्छौं ।’
जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले मन्त्रीको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । श्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहायप्रसाद यादव, रेणु यादव र प्रमोद शाहको नाम आएको छ ।
४ दलीय गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्ला ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा डा. भट्टराइले भने,’बहुदलीय लोकतन्त्रमा विभिन्न संभावना हुन्छन्, चुनावसम्म नै यो गठबन्धन कायम गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं, त्यो के हुन्छ भविश्यले निर्धारण गर्नेछ ।’